Xaflad lagu gudoonsiiyay Qalab faneed Kooxda Horseed oo ka dhacday Xarunta Villa Baydhabo -Sawiro
Hey’adda Cilmi barista iyo wada tashiga ee CRD ayaa shalay qalab faneed noocyadiisa kala duwan gudoonsiisay oo ay ku jiraan qaar casri ah waxaa ay gudoonsiisay Kooxda Fanaaaniinta Horseed ee Ciidamada qalabka sida.
Qalabkaas ayaa la gudoon siiyay kooxda Horseed, kadib Xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay Villa Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee talliska ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed , waxaana xafladaas goobjoog ka ahaa isla markaasna ka jeediyay qudbado kala duwan taliyaha ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed General C/qaadir Sheekh Cali Diini iyo Maareeyaha golaha murtida iyo mida daalada Abwaan cabdi dhuux.
Taliyaha Ciidamada xooga dalka ayaa ku dheeraaday sida ay muhim u tahay in dib loo soo nooleeyo kooxda fanka ee Horseed.
“Kooxda Horseed ma ahayn koox Ciidan ee waxaa ay ahaayeen koox qaranka oo dhan ku guubabiso wadaninimo iyo difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed”ayuu yiri Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini.
Maareeyaha Golaha Murtida iyo madadaalada Abwaan Cabdi Dhuux Yuusuf ayaa sheegay in Fanku ka mid yahay tiirarka umaddu ku taagsato marka ay horumar tiigsanayso.
Sidoo kale waxaa Khudbad ka jeediyay Madaxa Hey’adda CRD Jibriil Ibraahim Cabdulle oo wareejiyay qalabkii ay ugu deeqday Hey’adiisu Kooxda Horseed, kuna bogaadiyay inay horay u sii wadaan fankooda.
Mr Jibriil ayaa sheegay in aanay aheyn markii u horeysay ee Hey’adda CRD ay ku taageerto qalab Kooxaha Fanka Soomaaliyed, balse ay horay Hey’adda ugu qabatay Kooxaha Fanka Soomaaliyed barnaamijyo lagu soo nooleynayo Kooxahga fanka dalka
Sidoo kale waxaa uu Mr Jibriil u balan qaaday dhamaan kooxaha fanka inay ugu deeqi doonaan qalab ceynkan oo kale ah, isla markaana ay diyaar u yihiin inay soo nooleeyaan Fanka Soomaaliyed.
Qalabkan la gudoonsiiyay Kooxda Horseed oo ka mid ah Kooxaha Fanka Soomaaliyed ayaa ku soo beegmeysa iyadoo howlo dayactir uu ka socdo Golihii Murtida iyo Madadaalada ee National Theatre ee magaalada Muqdisho.